Let's talk about IT: ၆၃ မကျတဲ့သူမဖြစ်စေနဲ့။
မနေ့က Aဂျိုင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို မြည်းရင်း ဘာတွေ့လည်းဆိုတော့ မပြီးနိုင်တဲ့ ကိစ္စကိုပြီးအောင်လုပ်ခိုင်းရင် အခိုင်အမာကာကွယ်ဖို့ပြောထားတာဖတ်လိုက်ရတယ်။
Aဂျိုင်းဆိုတာ Agile ကိုပြောတာပါ။
ဒီနှစ်ထဲမှာ Target လုပ်ထားတာက SCJA ဖြေဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် စာများများဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Agile နဲ့ Spring ကို အများဆုံးဖတ်ပါတယ်။
Singapore မှာ Software Engineering ကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့သူ အနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောရင် ယုံကြပါ့မလားမသိဘူး။ စလုံးတွေ စပြားတွေသိပ်တော်တာပဲဆိုတာကို မကြာမကြာကြားရပါတယ်။ တော်တာလည်းရှိပေမယ့် ရှော်တာတွေက ပိုများပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ Life မှာ စာများများဖတ်ချိန်မရတော့တာလည်းပါပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ် များများလေ့လာတဲ့သူက မလေ့လာတဲ့သူထက် သာသွားတာပါပဲ။ သိပ်အထင်မကြီးနဲ့။ အတွေ့အကြုံအရလုပ်နေကြပေမယ့် တကယ်တမ်း သီအိုရီကို သွေဖယ်တာတွေကြောင့် ထွင်ပြီးသားဘီးပြန်ထွင်နေရတဲ့ ပရောဂျတ်တွေအများကြီးပါပဲ။ reinventing the wheel ဖြစ်ရင် သေချာပေါက် ဒုက္ခနဲ့လှလှတွေ့ပါပြီ။
Singapore မှာ ဘာတွေကိုအဖြစ်လုပ်လဲဆိုတာတွေကိုချည်းပဲရေးရင်တောင် တော်တော်များများရပါမယ်။ Team Lead တွေဟာ စာမဖတ်တာကြာတဲ့အခါ Failed ဖြစ်မယ့် Project ကို လူနှစ်ဆထည့်နေတုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါဆို သီအိုရီအရ ပိုပြီးသေချာပေါက် Failed ဖြစ်ပါတယ်။ မသိလို့ ရေးနေတဲ့သူတွေကို လူသစ်တွေက လာလာမေးတဲ့ interactions ကများလို့ပါ။ သိပ်တော်တဲ့လူတွေကိုလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ငှားလို့မရပါဘူး။ ပေါချောင် မကောင်းပဲရှိပါတယ်။ ပေါချောင်ကောင်းဆိုတာ software engineer တော့မရပါဘူး။ အဲဒါကို သီအိုရီကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင် မိန်းမတစ်ယောက်က ၉ လမှာ ကလေးတစ်ယောက်မွေးလို့ရရုံနဲ့ မိန်းမကိုးယောက်ပေါင်းပြီးတစ်လတစ်ယောက်မွေးလို့မရသလိုပဲတဲ့ .....။ အဲဒါလေးကိုတော့ဖတ်ထားဖို့လိုပါတယ် ... Team lead လုပ်မယ့်သူတွေပေါ့လေ။
Agile Development မှာ User ကို Development Process မှာ အဓိကထားပါတယ်။ တစ်ခုရေးပြီးတာနဲ့ Userကိုပြ၊ မကြိုက်ရင်ပြင် ၊ ပြန်ပြ၊ ကျေနပ်တဲ့အထိဖြစ်ရင် ကျေနပ်ကြောင်းကို တစ်ခါတည်း confirm လုပ်၊ ဆက်ရေး။ အဲဒီလိုသွားရပါတယ်။ စင်ကာပူမှတော့ Change Request လိုချင်လောဘက များလေတော့ user ကို milestone ရောက်မှပြ၊ မကြိုက်ရင်လည်းပို့ထားတဲ့ User Requirement တွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်၊ ညာချ၊ အဲဒါတွေဟာ လူကြီးလူကောင်းမဆန်ဘူး။ ပိုက်ဆံအချောင်လိုချင်တဲ့ အချောင်သမားပဲဆန်တယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ Agile ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်လာလို့ software တွေ quality ပိုကောင်းလာတယ်။ User satisfaction ရတယ်။ ပိုက်ဆံအများကြီးရကြတယ်။ ဒီမှာတော့ Deadline သာအမိ၊ Deadline သာအဖ၊ Quality သည် ဒုတိယဆိုတဲ့စကားကို ဥုံခံရွတ်နေတုန်းပဲရှိသေးတယ်။ Budget ကိုတွက်တဲ့နေရာမှာ စစ်တမ်းကောက်ရင် စင်ကာပူဟာ Software Engineering မှာရှေ့ကပြေးပါတယ်။ ရှိတဲ့လူနဲ့ြ့ပီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ မဖြစ်ညစ်ကျယ် တစ်ထွာတစ်မိုက်ဥာဏ်ကလည်း များပါတယ်။Software ပြီးသွားရင် External QA ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း မေ့ထားတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။
အဲဒီလိုလောကမျိုးမှာ ရှင်သန်ဖို့ ဘာမှသိပ်များများသိဖို့မလိုပါဘူး Skills က knowledge ထက်ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ သိပ်မြန်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲ။ ဘာခိုင်းခိုင်း အသေအကြေမြန်တယ်။ Analysis ကို အချိ်န်မပေးနိုင်ဘူး။ ရေးတာပဲ။ ရေးပြီးရင်းရေးနေတာပဲ။ Framework ကဘာလို့ Bean ကို Inject လုပ်တာလည်းမမေးနဲ့။ သိဘူး။ ရေးတော့ရေးနေတာပဲ။ ကိုယ်ဘာရေးနေမှန်းနားမလည်တဲ့ကောင်တွေ အများကြီးပဲ။ အဲဒါတွေဘယ်ကရောက်လာတာလဲ။ ဘာလို့ရောက်တာလဲအထိ မသွားတော့ဘူး။ ရေးလို့ရရင်တော်ပြီ။ Configure ဒီလိုလုပ်၊ ဒီလိုလေးရေး။ ဒါပဲ။ ဒီလောက်ဆို ရပ်တည်လို့ရပြီ။ တကယ်တမ်း Struts နဲ့ Spring ဘာကွာလဲ၊ ဘာလို့ကွာလဲ။ Lightweight framework တွေက Modern Software Industry မှာ ဘာလို့လွမ်းမှိုးသွားလဲ ...အဲဒါတွေမပြောနဲ့တော့ ...ရေြး့ပီးရင်းရေး ... Quality အသင့်အတင့်လောက်ရေးတတ်ရင်ရပြီ။
တကယ်တမ်း ... သိအောင်ကြိုးစားကြည့်ပြီး အပေါ်စီးက မြင်နိုင်ရင် လေ့လာတဲ့နေရာမှာ အများကြီးလွယ်ကူပါတယ်။ Java မှမဟုတ်ပါဘူး OO concept က ဒါတွေပဲရှိတယ်။ ဘယ်လို implements လုပ်သလဲလောက်လေ့လာလိုက်ရင် Java ရဲ့ Branch တွေကို လေ့လာတဲ့အခါ အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ Code တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ရေးနိုင်လာပါမယ်။ ပိုပြီးထောင့်စေ့တဲ့အမြင်ရလာပါမယ်။ အခြေခံလေးတွေဆိုပြီး အဆင့်မကျော်လိုက်ပါနဲ့။ အဆင့်ကျော်ထားရင် ဘာဖြစ်မလဲ .....။ ၆၃ မကျတဲ့သူဖြစ်သွားပါမယ်။
Design Pattern စာအုပ်ထဲမှာပြောထားတာတစ်ခုကို မှတ်မိလို့ပြန်ပြောရရင် Inheritance သိပ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး မလိုဘဲလျှောက်သုံးတာကိုရေးထားတာပါ။ ဘဲတွေက ပျံတယ်ဆိုတဲ့ ဘဲ class ကို extends လုပ်တာများသွားတော့ plastics ဘဲဆိုလည်း super class ကဘဲလိုပဲ ပျံနေတော့တာပဲ။ အဲဒီလိုတွေဖြစ်လာတော့မှ interface သုံးပြီး implements ကြတာတွေဖြစ်လာတာပါ။ OO Concept တွေဘယ်လောက်ကျေလဲသိအောင် Design Pattern နည်းနည်းလောက်တော့ပြန်ဖတ်ပါ။ ကိုယ်က များများသိတယ်ဆိုရင် ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဖတ်လိုက်မှ အော် ဒီလိုကြီးလားဆိုရင်တော့ ပြန်စဉ်းစားပါ။ ကိုယ့်ကြောင့် Software ထဲမှာ plastic ဘဲ ဘယ်နှစ်ကောင်ပျံကုန်ပြီလဲဆိုတာကိုပေါ့လေ။
စာများများဖတ်ပါ။ ၆၃ ကျချင်ရင် စာဖတ်ပါ။ စင်ကာပူက ညီလေးတွေကို ပြောချင်ပါတယ်။ Library မှာ ဖတ်ပါ။ ဖတ်လို့ကြိုက်မှဝယ်ပါ။ ၀ယ်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့စာအုပ်တိုက်ကို မှတ်ထားပါ။ ဥပမာ ... တစ်ချို့က Manning ကရှင်းတာတွေကို သဘောကျတယ်။ In action series တွေ သိပ်ရှင်းတယ်။ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကမကြိုက်ဘူး။ ကြာတယ်လို့ထင်တယ်။ Apress ကိုတစ်ချို့ကကြိုက်တယ်။ တစ်ချို့ကHead First တွေကြိုက်တယ်။ တစ်ချို့က Packet ကိုကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ဖတ်ပါ။ အဓိကကဖတ်နေဖို့နဲ့ သုံးကြည့်ဖို့ပါပဲ။
သုံးကြည့်ဖို့ဆိုတာကို နည်းနည်းချဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ သုံးတယ်ဆိုတာက သုံးတတ်ရင်တော်ပါပြီ။ တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ နားလည်ဖို့ ရေးကြည့်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို Academic ပိုင်းကလာတဲ့သူတွေက လက်တွေ့လုပ်ရမှာ အတော်လေးပျင်းပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင် ရတယ်ဆိုတာကို သိရင် ရပ်ထားတာများပါတယ်။ တကယ်လုပ်ကြည့်မှ Tips and Tricks လေးတွေကိုသိရပါတယ်။ အဲဒီလိုသိအောင်တော့ အနည်းနဲ့အများတကယ်လုပ်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။
အခု လုပ်နေတာက Insurance company တစ်ခုရဲ့ software ကို maintain လုပ်ကြတာပါ။ ဘယ်လောက်တလွဲတွေလုပ်ထားလည်းဆိုတာကိုရေးလိုက်ရင် Insurance system ကြီးဒီလောက်သက်ဆိုးရှည်နေတာကိုတောင် အံ့သြမိပါတယ်။ အဲဒီလို ၆၃ မကျတဲ့ကောင်တွေ ရေးသွားလို့လည်း ငါတို့အလုပ်တွေပေါနေသေးတာလို့ ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
Problem Solving Skills တိုးတက်ဖို့ အသေချာဆုံးနည်းက Systematic ဖြစ်ဖို့သတိထားပါ။ ဘယ်သူပြောတာကိုမှမယုံနဲ့။ Codes ပြောတာကိုယုံ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် source code ကြည့်။ ဘယ်သူဘာပြောပြော source code လောက်မသေချာဘူး။ Right Track ကို သွားဖို့ အမြန်ဆုံးနဲ့ ပြဿနာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ အတွက် အမြဲလေ့ကျင့်နေပါ။
အမြဲသုံးနေရတဲ့ folder တွေ software တွေဆီကို click သုံးချက်ထက်ပိုနှိပ်ြ့ပီးသွားနေရရင် ငပေါ Developer ပါပဲ။ အဲဒီလို Efficient မဖြစ်တာတွေကိုရှောင်ပါ။ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ဘာပဲသိမ်းသိမ်း structure ကျကျသိမ်းပါ။ Mail ကို Archive လုပ်ရင်လည်း ဖြစ်ကတတ်ဆန်းမလုပ်ပါနဲ့။ စနစ်ကျပါ။
အထက်လူကြီးကိုပြောရင် ယောင်ဝါးဝါးမလုပ်ပါနဲ့။ ပြတ်ပြတ်သားသား တိတိကျကျပြောပါ။ အလုပ်ကို အချိ်န်မဆွဲပါနဲ့။ ပြီးမှနားပါ။ မြန်မြန်မလုပ်တာကြာရင် လူက နှေးသွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာရင် တစ်ခြားတစ်ခုခုကို လေ့လာပါ။ ကိုယ့်အစွမ်းအစကို မတုံးသွားစေပါနဲ့ သက်သက်သာသာနေရာမှာ ကြာကြာနေလေလေ ညံ့လေပါပဲ။ တစ်ချိန်ကြရင် အရင်က အတူတူဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ သိပ်ကွာသွားမယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ချင်သလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။
Java မှာ စိတ်လေလောက်စရာ Dependency Issues တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကြုံရင် Forum တွေဖတ်ပါ။ လူများတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ စိတ်အေးအေးနဲ့လေ့လာပါ။ စိတ်ဘယ်တော့မှမပူနဲ့။ စိတ်ပူနေစရာမလိုဘူး။ ဒီအလုပ်က ကမ္ဘာမှာအခက်ဆုံးမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူတွေ ရှာထားလိမ့်မယ်။ မတွေ့ရင်လည်းကိုယ့်ထက်ညံ့တဲ့ကောင်တွေမတွေ့သေးဘူးလို့မှတ်ပါ။ နားလည်အောင်ကြည့်ပြီးမှ ဖြေရှင်းပါ။ ရမ်းကစ်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အချိန်ကုန်ပါတယ်။
API တွေကိုဖတ်ပါ။ အဲဒီလိုပြောရင် ရယ်စရာတစ်ခုကိုသတိရပါတယ်။ ထမင်းစားနေုတုနုး ကျွန်တော်တို့ Java သမားနှစ်ယောက်က API အကြောင်းပြောနေတာကို တစ်ခြား Language ရေးတဲ့သူငယ်ချင်းက dot လေးချလိုက်ရုံနဲ့မရဘူးလားဆိုပြီး အရေးထဲ IDE ရဲ့ auto completion (intellisense) နဲ့လာယှဉ်ပြောနေလို့ အတော်လေးစိတ်လေရပါတယ်။ Eclipse ကလည်း Auto Completion မှာ ထိပ်တန်းကရှိပါတယ်။ ရေးထားတဲ့သူတွေကလည်း ကမ္ဘာမှာ အတော်ဆုံးတွေပါ။ API ကတော့ Java သမားတွေ အတွက် အကောင်းဆုံးလေ့လာစရာပါပဲ။ API ထဲမှာ ဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရင် အတော်လေးအိုကေသွားပါတယ်။
Java သမားတစ်ယောက်ဟာ တကယ်ရေးတဲ့နေရာမှာ ကြာကြာလေးနေဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင် Training ground မဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေလိုပဲ။တကယ်တမ်းကြတော့ ၆၃ မကျတော့ဘူး။
မြန်မာတွေက မညံ့ပါဘူး။ အခု ဖိလစ်ပင်းတွေနဲ့ အိန္ဒိယတွေ၊ တရုတ်တွေ စင်ကာပူကို Mass Export လုပ်နေချိန်မှာ Software သမားတွေအနေနဲ့ အများကြီးလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကုလားတွေက စာဖတ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဖဦးထုပ်နဲ့ တရုတ်ကတော့ ထင်သလောက်မဟုတ်တာများပါတယ်။ အဲဒီလို အပြိုင်အဆိုင်ပိုများလာတဲ့အချိန်မှာ တပမ်းသာဖို့က တကယ်တော်တဲ့လူဖြစ်ဖို့နဲ့ Flexibility ကောင်းဖို့၊ ၆၃ ကျဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ အားနည်းနေတဲ့အပိုင်းကိုရှာပါ။ ဖြည့်ဆည်းပါ။ တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာ ဒီက ရေးနေတဲ့ သာမန် Developer တွေကို ကျော်တက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာမှမပူပါနဲ့။ မြန်မာတွေလောက်ဘယ်သူမှ အားအားယားယား လေ့လာဖို့ အချိ်န်မရှိပါဘူး။ ဒီကို ရောက်နေတဲ့ Computer ကညီငယ်တွေ၊ IT ကညီငယ်တွေ၊ညီမငယ်တွေအားလုံး ကျောင်းမှာ ဖတ်ခဲ့တဲ့စာတွေကိုပြန်တွေးလိုက်ပါ။ အဲဒီဖတ်ခဲ့တာတွေရဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုပုံမှန်ဖတ်ပါ။ စင်ကာပူမှာ မြန်မာတွေတော်တာကို လက်ခံလာတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ထပ်ပြီးသက်သေပြကြပါ။ နောက်လူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးကူညီပေးလိုက်ဖို့က ကိုယ့်နေရာမှာ ကိုယ်ဟာ အကောင်းဆုံးလူဖြစ်နေဖို့ပါပဲ။
ညံ့နေတာကို ညံ့နေမှန်းမသိတဲ့သူကတော့ ဆက်ပြီးညံ့နေဦးမှာပါ။
စိတ်ဓာတ်ကနေစရပါမယ်။ တကယ်သိချင်ရင် သိဖို့ အများကြီးအခွင့်အလမ်းပေါ်ပါတယ်။ သိချင်စိတ်မရှိတဲ့သူကတော့ အခွင့်အလမ်းပေါ်ရင်လည်း မလေ့လာတဲ့အတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိပါဘူး။
ဒီဆောင်းပါးက နည်းနည်းတော့ လိုရင်းမရောက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ့် Main Theme ကတော့တစ်ခုတည်းပါ။ Let's prove we are the best !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dedicated to all young Software Engineers ..., Coders, Debuggers,Deployers,DBAs,BAs and QAs.
Posted by Zero Divided by Zero is Zero (Brahmagupta Rule) at 10:21 AM
Labels:bProactive
Thanks bro, for your encourange. i need to remind myself...